FIFANARAHANA ALMA/CUA : Endriky ny fambotriana Firenena nataon-dRavalomanana – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 12:35
Accueil/Politika/FIFANARAHANA ALMA/CUA : Endriky ny fambotriana Firenena nataon-dRavalomanana
Ankoatra ny raharaha Mbs, isany nanaitra ny maro koa ny fanambarana nataon’ny Ben’ny tanàna Andriantsitohaina Naina, ny herinandro lasa teo, mahakasika ny kariera any amin’ny lalam-pirenena faharoa PK7, izay trandrahan’ny orinasan-dRavalomanana nanomboka ny taona 2001. Araka ny fanadihadiana, tsy nisy ny tamberim-bidy naloan’ity orinasa ity nanomboka io taona io, izay Ravalomanana ihany no Ben’ny tanàna nanome alalana sy nanao ny fifanarahana tamin’ny orinasany tamin’izany…
Lucien R. 19 août 2020
Ravalomanana Marc no tompon’ny orinasa Alma. Mbola izy koa no Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ny taona 2001, izay nanome ilay kariera ho an’ity orinasany manokana ity. Na izay endrika fifanarahana izay fotsiny aza dia efa azo hanatsoahana ny fikatsahana tombontsoa manokana sy ny fanaparam-pahefana nisy teo amin’ny mpitantana ny tanàna tamin’izany. Tsy mijanona hatreo anefa, fa rehefa tena jerena ny antsipirian’ny fifanarahana, dia ahitana teboka maromaro tsy araka ny tokony ho izy sy tsy ara-drariny. Araka ny hita ao amin’ny fifanarahana ohatra, 50 taona be izao no nomena ny orinasa Alma hitrandrahany ny kariera an-kalalahana. Tsy vitan’izany anefa, fa ny tena loza ao anatin’ny fifanarahana, dia mbola ny Kaomina Antananarivo koa no nanome ny fitaovana rehetra niasan’ny Alma, araka ny andininy fahefatra ao amin’ny “convention d’exploitation et de mise en concession”. Ary koa, mbola nomena an’i Alma koa ny trano rehetra eo ambonin’ilay tany kariera nomena azy. Izany hoe, tena notoloram-potsiny izany ny orinasa alma.
Ampahany amin’ireo hita ao anaty taratasy fifanarahana teo amin’ny Kaominina sy ny Orinasa Alma.
Alma navadika Asama
Araka ny andininy fahaenina ao amin’ny taratasy fifanarahana, 5% fotsiny amin’ny vola miditra amin’ny vidin’ny vato (moellons sy gravillons), izay trandrahan’ny orinasa Alma ihany no mba tamberim-bidy tokony homena ny Kaominina Antananarivo. Ny tena mahavalalanina amin’ny fifanarahana àry, dia ny nahitana fa raha misy tsy fahafahan’ny alma manoatra ka tsy afaka mandoa ny “redevances” izy, dia miato izany fandoavana izany mandra-pilamin’ny orinasa. Taiza no mbola nisy an’izany teto ambonin’ny tany ka hoe manaiky ny tompon-trano fa raha sendra sahirana tsy azo hanoharana ny mpanofa trano, dia afaka tsy mandoa hofatrano aloha mandra-pilaminy? Raha tsorina, tsy nandoa tamberim-bidy na “redevance” izany mihitsy ny Alma nanomboka ny 2001, nitrandrahany vato teo. Ny azo antoka anefa dia tsy toko tsy forohana ny tombony azon’ity orinasa ity, satria tsy niantoka n’inona na inona izy fa ny Kaominina daholo no niantoka, hatramin’ny fitaovana kely indrindra nampiasainy teo. Tsara ny mitondra fanamarihana fa rehefa niala teo amin’ny fitondrana i Ravalomanana, dia rava ny orinasa Alma. Ka rehefa tonga teo amin’ny fitantanana ny tanana indray Ramatoa Ravalomanana Lalao, dia navadiny ho Asama indray ilay Alma. Araka ny hita ao amin’ilay “Avenant”, dia mbola notohizana ny fitrandrahana vato teo amin’ny kariera fa mbola tsy nandoavana na ariary ihany aza.
Orinasa Alma Ravalomanana
FANENJEHANA NY GOVERNEMANTA: Nampiaka-peo teo anoloan’ireo Depiote ny Praiminisitra
TRANGANA COVID-19 MAHERIN’NY 100 ISAN’ANDRO: Ho fantatra anio ireo fepetra horaisin’ny Fitondram-panjakana
FISOROHANA NY COVID-19: Mitsahatra ireo tsena lehibe isan-kerinandro eto an-drenivohitra
Fisorohana ny lozam-pifamoivoizana amin’ny RN-1 : Nentanin’ny Zandary avokoa ireo mpampiasa lalana tsy hisetrasetra